“Waxaa farxad noo ah in walaalkay 20 kadib xorriyaddiisa helay..” | Baraarug News
Home Wararka “Waxaa farxad noo ah in walaalkay 20 kadib xorriyaddiisa helay..”
“Waxaa farxad noo ah in walaalkay 20 kadib xorriyaddiisa helay..”
ILAAHAY BAA MAHAD LEH.
[ Qoraal yara dheer, balse nuxur nafhurnimo xambaarsan].
W/q Cabdiqaadir Saalax Iidle
Qoys ahaan, maanta waxaa farxad gaar ah noo ah in Walaalkay Daauud Saalax Iidle oo muddo ku dhow 20 sanno xidhnaa uu dib u helay xorriyaddiisii. Duruuf kasta & dedaal kasta oo aanu hore u bixinnay sidii uu caddaalad u heli lahaa hore walaalkay uma uu helin, balse maanta ayaa ALLE qaddaray in uu soo baxo isaga iyo 4ka mid ah saaxiibadiisii ay muddada wada xidhnaayeen.
Previous articleXil Guruuje “Waxaan leeyahay Wixii tagay tiigsimaad ma leh..”
Next articleWasiirkii Oo Garab Rarato Noqday